अपहरणमा परेको तेस्रो दिनमै व्यवसायी श्रेष्ठको हत्या, कसले गर्यो अपहरण ֍
काठमाडौं । अपहरणमा परेको तीन दिनमै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–५ का व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको हत्या भएको खुलासा भएको छ । गत २६ जेठको राति अपहरणमा परेका उनको हत्यामा संलग्नमध्ये केही अभियुक्त पक्राउ परेसँगै यस्तो तथ्य खुलेको हो । हत्याका अभियुक्तले दिएको सूचनाका आधारमा २१ दिनपछि शुक्रबार मात्र श्रेष्ठको शव सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४ झिम्पे रेन्जको जंगलमा फेला परेको...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यष प्रचण्डलाई बालुवाटार निवासमा डाकेर मन्त्रिपरिषद् छिट्टै विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरे । आफ्नो समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि प्रचण्ड पहिलोपटक बालुवाटार पुगेका हुन् ।दुई नेताबीच नयाँ सरकार सञ्चालन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित दोस्रोे चरणको चुनाव सफलताबारे कुराकानी भएको प्रचण्डको...
काठमाडौं । रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–६ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार एक मतले विजयी भएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादीका वडाध्यक्षका उम्मेदवार सुधन रेग्मीले ४७० मत ल्याए । गठबन्धनका उम्मेदवार पूर्णबहादुर मल्लले ४६९ मत पाए । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–२ मा पनि एक मत अन्तरको हारजित भएको छ । वडाध्यक्षमा उठेका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णकुमार...
बाल दुराचारी जर्मन नागरिक पक्राउ
काठमाण्डाै । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाल यौन दूराचारको आरोपमा ६३ बर्षीय जर्मन नागरिक अल्बर्ट फ्रेड क्लिनिकेलाई पक्राउ गरेको छ । उनले नेपाली नाबालकहरुलाई खानेकुरा र विभिन्न सामान दिई प्रलोभनमा पारी यौन दुराचार गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । अल्बर्ट २३ बर्षदेखि नेपाल आउने जाने गरिरहेका थिए । पछिल्लो १५ बर्षयता भने उनी बारम्बार नेपाल,...
लाइसेन्स पाउनै ३ महिना
काठमाण्डाै । उपत्यकामा मात्रै नयाँ र नवीकरण गरी अहिले दैनिक झन्डै २ हजार थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को माग छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले माग धान्न सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स प्रतिदिन १५ / १६ सय मात्र छापिने गरेको छ । दैनिक ४ देखि ५ सयसम्म स्मार्ट कार्ड अपुग हुने गरेको हाे । त्यसमाथि...
भन्सारमा अब ‘गेट इन्ट्री नोट’
वीरगन्ज । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गेट इन्ट्रि नोट प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवका अनुसार यार्डस्थित ३ नम्बर गेटमा बुधबारदेखि अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ । अनलाइन प्रणालीमा भन्सार यार्डमा कति नब्रका मालबाहक सवारीले के के सामान बोकेर प्रवेश गरे भन्ने जानकारी मिल्छ । मालसमामानको परिमाण...
असन्तुष्टि पोख्न ‘नो भोट’
काठमाण्डाै । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई स्थानका मतदाताले नो भोट को अध्यास गरेको छन् । प्रदेश नम्ँबर १ को पूर्वी पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका ६ तिङ्लामा मतदाताले मतदान गरेनन् । त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ५ को नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका ६ का मतदाताले पनि मतदानमा भाग लिएनन् । काराण हो आफूहरुले चाहेअनुसार पुन संरचनापछि उनीहरुले...
अमेरिकी अदालतले भन्यो – ‘नेपालीलाई शरण दिन सकिन्न’
न्यूयोर्क। अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ । हालैको एउटा मुद्दामा अमेरिकाको पुनरावेदन अदालत (युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेन्ड सर्किट)ले यस्तो फैसला गरेको हो । अमेरिकामा राजनीतिक शरण (एसाइलम) सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गर्छ...
१२ कक्षा पढ्ने सिद्दिकी माअोवादीबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित
दाङ । दाङको गढवा गाउँपालिका ८ को अध्यक्षमा २३ वर्षीय सद्धाम सिद्दिकी निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सिद्दिकी निर्वाचित भएका हुन् । जिल्लाको पुरानो व्यापारिक केन्द्र तथा भारतीय सीमा जोडिएको वाडबाट सिद्दिकी वडा अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले कोइलावासमा बस्ने पुस्ताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय घोषणा गरेका छन् ।...
एमालेसँग नजिकिँदै राजपा, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिाँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । राजपाले विकल्पका रुपमा एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्नसमेत सुरु गरेको छ । आगामी साथा बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट राजपाले समर्थन र्फिातको निर्णय गर्दै नयाँ सरकारको सम्भावनाबारे एमालेसँग छलफल सुरु गर्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । असार २१ मा बस्ने...
२ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनप्रति अमेरिकाको यस्तो चासो
काठमाडौँ। अमेरिकाले असोजमा हुने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनमा विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिन नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब दिएको छ। निर्वाचन आयोग र सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा विदेशीलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिन नसकिने प्रस्ट रुपमा बताइसकेको भए पनि अमेरिकी दूतावासले बिहीबार वक्तव्य निकालेर पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने बताएको हो । दूतावासले भनेको छ, ‘स्थानीय निर्वाचनको...
एकै दिन पाँच करोडको दही
काठमाडौँ। उपत्यकामा एक दिनमै पाँच करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको दहीको कारोबार भएको छ । असार १५ मा यो परिमाणमा दहीको कारोबार भएको छ। असार १५ मा दही र चिउरा खानैपर्ने नेपाली संस्कार छ । त्यसैले यो दिन सामान्य दिनभन्दा उपत्यकामा झन्डै पाँच गुणाभन्दा बढी दहीको माग हुने गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर रहेको...
दलालका कारण शेयर कारोबार बन्द
काठमाडौँ। नेप्से बजार खुले पनि शेयर दलाल किनबेचमा संलग्न नहुँदा बिहीबार शेयर बजार कारोबार बन्द भएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागले शेयर दलाल व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्न पत्राचार गरेको भन्दै बिहीबार शेयर कारोबार बन्द गरेका हुन् । आन्तरिक राजश्व विभागका विभिन्न कार्यालयले कर उठाउने पत्र पठाएको विरोधमा नेपाल स्टक दलाल संघको बिहीबार बिहान आपतकालिन बैठक बसेको...
काठमाडौँ। कतारले साउदी अरबको मरुभूमिमा कार्यरत नेपालीसहित एसियन देशका गोठाला, कृषक कामदारहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । कतार मानव अधिकार समितिले कतारी नागरिकको साउदीमा रहेको मजरा (खेतीपाती), ऊँट र बाख्रा हेरविचार गर्ने घरेलु कामदार ठूलो मानवीय समस्यामा रहेको जनाएको हो । उनीहरूलाई कसैको पनि संरक्षण नरहेको, साथमा रकम नभएको र आधारभूत अधिकारबाट...
बम हातले फालेर सबैको सलाम खाने प्रहरी हवल्दार रानाको यस्तो छ नालीबेली
काठमाडौं । बम हातले समातेर फाल्ने प्रहरी हवल्दार दुर्गाबहादुर रानालाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले फोन गरेर बधाई दिनु भएको छ ।अन्नपूर्ण पोस्ट्डटकममा पहिलो पटक समाचार सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्रीले रानालाई फोन गरेर बधाई दिनु भएको हो। गृहमन्त्री शर्माले हवल्दार रानालाई सम्मान गर्ने समेत घोषणा गर्नु भएको छ। यसैबीच बुधबार नै रानालाई स्थानीयले नागरिक अभिनन्दन समेत गरेका छन्।...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ पछि प्रकाशित नतिजाबमोजिम एमबीबीएस चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तहमा भर्ना गर्न/गराउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्यसबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। एमबीबीएस चिकित्सकको विशेषज्ञ तहमा भर्ना र शुल्क प्रकरणलाई लिएर विवाद सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको...
प्रहरी सेटिङमा अवैध खानी
ललितपुर। लेले नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगहरुबाट उत्पादित ढुंगा तथा गिट्टी बोक्ने ट्रिपरहरु चापागाउँ प्रहरी वृत्त अगाडि नै भएर निर्वाध चलछन् । तर प्रहरीले तिनलाई देख्दैनन् । अवैध खानी र क्रसर उद्योगहरु टीका भैरव प्रहरी चौकीबाट ५ सय मिटरको दुरीमा छन् । सेटिण्मा खानी तथा क्रसर सञ्चालन भइरहेकोले सबै चुप लागेको नल्लु...
काठमाडौं। तीन प्रदेशका ३३४ तहका १५ हजार ३८ प्रतिनिधि छान्न बुधबार भएको निर्वाचनमा करिब ७३ प्रतिशत मतदान भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा बुधबार भएको निर्वाचनमा आधा दर्जन छिटपुट घटनाबाहेक सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बहिष्कारका लागि आह्वान गरेको राजपा नेतृत्वले भने नैतिक र राजनीतिक...
‘राज्यले हामीलार्इ हेप्यो’
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीति र आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा मुलुककै अग्रणी सुदूरपूर्वी जिल्ला झापाका दुर्गम दक्षिणी गाउँ नीति-निर्माता र जनप्रतिनिधिको नजरमा पर्न सकेका छैनन् । भारतीय सीमाका यी गाउँमा उत्साहित भएर बुधबार मतदान गरेका मतदाताले गाउँ अधिकारसम्पन्न भएको र बजेट सोझै गाउँमै आएकाले अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले गाउँ विकसित र समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका छन् । झापाका...
काठमाडौँ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य र शीर्ष नेताहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन बुधबार चुपचाप बसेका छन् । तर कार्यकर्ता भने, मतदानमा सहभागी भए । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य अनिल झा बुधबार काठमाडौ.मा थिए भने, सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरत्सिंह भण्डारी र राजकिोर यादव काठमाडौं बाहिर थिए । संयोजक ठाकुर बिजुलीबजारस्थित पुरानो...
नेकपाको जिल्ला बन्द गर्ने यस्तो चेतावनी
हेटौडा। पक्राउ गरिएका आफ्ना ३ नेतालाई तत्काल रिहा नगरे नेकपा माओवादीले २ दिन मकवानपुर बन्दको चेतावनी दिएको छ । बुधबारको लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्न सक्ने आशंकामा नेकपा विप्लवका मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज जवाल, सचिवालय सदस्यद्धय मजदुर नेता सोम घलाना र दीलीप स्यांतान मंगलबार पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई रिहा नगरे असार १६ र १७...
राजपाप्रति स्थानीयको आक्रोश : राजपा भन्छ – आन्दोलन जारी छ
काठमाडौँ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनविरुद्ध राजपा नेपालले गरेको बन्दखप्रति २ नम्बर प्रदेशमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । निर्वाचन नभएपनि राजपाले बन्दको आह्वान गरेको भन्दै जनकपुरमा केही युवाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवले निर्वाचनको विरुद्धमा आन्दोलन जारी रहेको बताउँदै केही प्रदेशमा सरकारले बलपूर्वक निर्वाचन गराएको दाबी गरे । आजको नेपाल...
श्रीमती भेट्न आउदैँ थिईन् : श्रीमानलाई मध्यराति कालले टपक्क टिप्यो !
काठमाडौं। डाक्टरले असार ३ गते सन्तान जन्मने मिति तोकेपछि श्रीमतीले पटकपटक फोन गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनमा कार्यरत दीपक मास्केलाई घर आउन आग्रह गरे पनि इन्स्पेक्टर योगेन्द्र हमालले सुत्केरी हुँदैमा घर जानुपर्छ र भनिदिँदा एकप्रकारले डिप्रेसनमा परेका थिए उनी । दोहोरो चेपुवामा एकसुरेजस्तै बनेका दीपकले गाँजासेवन गर्न थाले । धादिङ जिल्ला घर भई तीन वर्ष्अिघ...
काठमाडौँ। प्रदेश–१, ५ र ७ का स्थानीय तहका जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आज (बुधबार) मतदान गर्दै छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीको संविधान संशोधनको अडान कायम नभएको भए प्रदेश–२ का स्थानीय तहका मतदाता पनि आज मतदानका लागि लामबद्ध हुन्थे। राजपाको अडानका कारण अब २ असोजमा मात्र मतदान गर्न पाउने यो प्रदेशका जनता भने यतिबेला अन्य प्रदेशमा जस्तै...
मौसमविद् भन्छन्ः चिन्ता नलिनुस्, आज मुसलधारे पानी पर्दैन
काठमाडौँ। सोमबार रातिदेखि नै देशभरी मनसुन फैलिए पनि मुसलधारे र लगातार वर्षाको संभावना कम भएको मौसमविद्हरुले अनुमान गरेका छन्। बुधबार पनि बिहानदेखि अपरान्हसम्म मौसम सफा रहने बताउँदै मौसमविद्ले दिउँसो दुई, तीन बजेसम्म मुलुकभर भारी वर्षाको संभावना नरहेको अनुमान गरेका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् बरुण पौडेलले ‘बिहीबारसम्म दिउँसोको समयमा भारी वर्षाको संभावना नरहेको’...
काठमाडौँ। कांग्रेस-माओवादी सत्ता गठबन्धनसँग तीनबुँदे सहमति गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले आक्रोश प्रकट गरेका छन्। उनले एमालेप्रति देखिएको आक्रोश अब कांग्रेसतिर सरेको जिकिरसमेत गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर गत वर्ष साउन १९ मा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल चुन्नुअघि मधेसी...
झापा। बीस वर्षपछि बुधबार हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन पूर्वका गाउँमा यसरी लागेको छ, मानौं- कुनै भव्य उत्सव आयोजना भइरहेको छ । राजपालाई मनाउने प्रयासमा यसअघि कहिल्यै नभएको तिथि मध्यअसारमा तोकिएको चुनावले रोपाइँमा असर पुर्‍याएको छ तर किसानलाई यसको कुनै परवाह छैन । । यसअघि तीन कार्यकाल स्थानीय निर्वाचन नभई जनप्रतिनिधिविहीन बस्नुपरेको तोडमा मतदाता...
सिंहदरबारमा बल्ल सोलार
काठमाडौँ। साता वर्षयता चर्चामा रहेको सिंहदरबार भित्र सौर्य ऊर्जा (सोलार प्लान्ट) जडान गर्ने योजना बल्ल सुरू भएको छ। मुलुकको प्रखुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको छतमा सोलार जडान गर्ने २०६७ सालदेखिको योजना बल्ल कार्यान्वयन हुन लागेको हो। सोलारबाटै विद्युत आपुर्ति गरेर सिंहदरबारलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने गरी सरकारले तत्कालिन अवस्थामा तयार गरेको लोडसेडिङ न्यूनिकरण योजना...
काठमाडौँ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा, मिर्गौला, निमोनियालगायत दीर्घ रोगबाट ग्रसित बिरामीका लागि खतरनाक मानिएको रुघाखोकी (एचवानएनवान फ्लु भाइरस) काठमाडौंमा फैलिन थालेको छ। कुलेश्वरकी एक महिलालाई उक्त समस्या पुष्टि भएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरी चिकित्सकले उपचार सुरु गरेका छन्। उनीहरूले अरूलाई पनि सचेत हुनसमेत आग्रह गरेका छन्। ती महिलाको खकार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा...
विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण बन्द
काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले विदेशमा बनाइएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नेपालीकरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल भेटिएपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने कम्प्युट।र सफ्टवेयर ह्याङ भएकाले विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको...
रोल्पा। सधैं एक्लिएको अनुभव गर्दै आएका रोल्पा, थवाङका मतदाता यतिखेर मतदानको प्रतिक्षामा छन् । एतिहासमै चुनावबाट टाढा रहेको उनीहरुले स्थानीय तहको चुनाव नदेखेको धेरै भयो । आज (बुधबार) हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न थवाङीहरु व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । थवाङीले यसअघिका २०३८, २०५१, २०५४, २०५६ र २०७० सालका चुनाव वहिष्कार गरेका थिए । आजको नागरिकमा खबर रहेको...
काठमाडौँ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका तीन सय ३४ स्थानीय तहमा आज मतदान हुँदैछ ।आजका सबै पत्रपत्रिकामा यो खबर प्रथमिकताका साथ छापिएका छन् । मतदानका लागि ४ हजार ५ सय ८१ मतदान स्थलमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदान केन्द्र तोकिएमा छन् । मतदाताले बिहान ७...
धोबीखोलाको खाल्डोमा ५२ लाख रुपैयाँ !
काठमाडौं । वर्षा लागेसँगै काठमाडौंको अनामनगर र बिजुली बजारका स्थानीयवासी कतिखेर धोबीखोलाको बाढी घरमा पस्ने हो भन्ने चिन्ताले त्रस्त छन् । मुसलधारे पानी परेलगत्तै धोबीखोलामा पानीको बहाव माथिसम्म आउने र खोलामा रहेको फलामको पुलले पानी छेक्दा स्थानीयको घरघरमा पानी पसेर हिलाम्मे हुने गरेको छ । धोबीखोलाको पक्की पुल निर्माण गर्न भण्डार थोडंगा जिटेक जेभी ठेकेदार...
भोलि शीर्ष नेता को कहाँ मत हाल्दै֍
काठमाडौँ। स्थानीय तह दोस्रो चरणअन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गर्न सर्वसाधारण जनता आतुर छन् । सर्वसाधारण जनता मात्रै होइन, शीर्ष नेताहरु पनि भोलि विभिन्न मतदान केन्द्रबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । केही शीर्ष नेताले भने पहिलो चरणमै मतदान गरिसकेका छन् । शीर्ष नेताहरूले भोलि कहाँबाट मतदान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा- गन्यापधुरा गाउँपालिका–१, डडेल्धुराको असिग्राम उमावि मतदान केन्द्र...
काठमाडौँ। बहराइनका राजपरिवार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसहितका पदाधिकारीले घरबिदामा नेपाल गएका घरेलु कामदारलाई फर्कने इजाजत दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । बहराइनको राजधानी मन्मास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै उनीहरूले बिनाकारण कामदार रोकिएकोमा असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । कामदार रोकिनुको कारणबारे राजदरबारलगायत निकायबाट दूतावासमा दिनहुँ औपचारिक र अनौपचारिक सोधपुछ भइरहेको छ । गत चैत २० गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय...
चुनावबारे अमेरिका र बेलायतको यस्तो चासो
काठमाडौँ। अमेरिका र बेलायतले दोसे चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा संयम अपनाउन र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार दुबै दूतावासले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन सुरक्षा प्रति चासो प्रकट गरेको छ । अमेरिकाले निर्वाचनको उचित वातावरण निर्माण गर्न पनि सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । आजको...
ताप्लेजुङ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार फक्तालुङ गाउँपालिका–७ याङमामा ५५ मतदाताको नामावली सूचीकृत छ। बुधबार हुने स्थानीय तह चुनावमा भने यहाँ १७ मत मात्रै खस्नेछन्। वडाका उम्मेदवारहरूका अनुसार नामावलीमा नाम भएकामध्ये कसैको मृत्यु भइसकेको छ भने कोही विदेशमा छन्। काठमाडौंमा भएका कतिपय नआउने निश्चित भइसकेको छ। चुनावका लागि एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, दुई नासु...
के साह्रो देउवा !
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदान गर्ने डडेल्धुरा गाविस १ असिग्राम मावि रुवाखोला केन्द्रमा उनको नाम भएका ९ जना मतदाता पाइएका छन् । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा प्रधानमन्त्रीको नामसँग मिल्ने यति धेरै देउवा देखिएका हुन् । असली प्रधानमन्त्री देउवाका पिताको नाम प्रसादसिंह देउवा हो । अन्य देउवा भने उहाँको नामसँग मिल्ने देउवा मात्रै हुन् । आजको...
बोक्सो आरोपमा घाटी रेटेर हत्या
मोरङ। ‘बोक्सा’ आरोपमा पटक–पटक अपमानित हुँदै आएका यहाँका एक वृद्धको आइतबार राति विभत्स हत्या भएको छ। रंगेली नगरपालिका ९ स्थित स्थानीय बजार गएर फर्कदै गरेका ६३ वर्षीय पहाडचन राजबंशीको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ। बिच सडकमै रगताम्य अवस्थामा राजबंशीको शव फेला परेको थियो। हत्या कसले गरेको भन्ने खुलेको छैन। घटनास्थलबाट कुनै हतियार र शंकास्पद बस्तु...
काठमाडौँ। बुधबार दिनभरजसो वर्षा हुने भएपछि मतपत्र भिज्नेदेखि मतदातालाई आवतजावतमा समेत समस्या हुने देखिएको हो। प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ प्रदेशभर नै बुधबार वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले सुरक्षित रुपमा छाता, घुम, प्लास्टिक र वर्षादी बोकेर मतदान गर्न जान मौसमविदले सुझाव दिएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एयरपोर्ट स्टेसनका मौसमविद समिर श्रेष्ठले एक...